Georges Mandjeck Hugo Broos: "Waxaad seegtay fursad aad ku xirto" - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Georges Mandjeck oo Hugo Broos: "Waxaad seegtay fursad aad ku xirto"
Xiddiga reer Cameroon Georges Mandjeck ayaa la wareegay macalinkii hore ee xulka ka soo tagay, waxaana uu hoos u dhigay heerka uu ciyaaro Choupo Moting.
Goolka Hugo Broos oo ka soo horjeeda Choupo Moting ma uusan dhicin. Haddii uusan weli wax jawaab ah ka bixin faahfaahinta dhowaanahan ee tababarihiisii ​​hore ee Liberation, Georges Mandjeck, wuxuu lahaa kiniin adag oo la liqo. "Mr Hugo Broos, oo dhan ixtiraam darro awgeed, xaq uma lihid inaad ka hadasho Choupo Moting. Waxaad seegtay fursad fiican si aad u xirto, "ayuu saxaafadda u sheegay daafaca reer Cameroon April 10.
Hugo Broos ayaa dhawaan soo saaray warbixin cajiib ah oo ku saabsan booska Choupo Moting Paris Saint-Germain (PSG). "Heerka PSG waa mid aad u sareysa, isaga uma hayo tayada uu ka ciyaaro kooxdaan. Waa ciyaaryahan wanaagsan oo ka ciyaara koox yar, ma ahan ciyaartoy sida Neymar, Di Maria ama Mbappé, "ayuu yiri ka dib markii qalad uu ku guuleystay Chokaro Moting.
Kabtanka Libaaxyada Indomitable ayaa si kama dambeys ah u istaagay gool uu ka dhaliyay saaxiibkiisa kooxda Nkunku oo ka soo horjeeda Strasbourg. Ficilku wuxuu ku kasbaday jaahwareer iyo naqdin badan.
La sii daayay Hugo Broos ayaa dib usoo nooleynaya isaga iyo weeraryahanka PSG, markii uu joogay Belgium markii uu qaatay talaabadii ugu horeysay ee xulkiisa qarankiisa, lions Indomitable. Waxaa la soo saaray December 2017 sababo la xidhiidha awoodiisa.
Choupo Moting ayaa soo xushay warqadaha Hugo Broos ka dib markii uu kursiga keydka ku soo laabtay si uu uga faa'idaysto ciyaartoyda kale. Tallaabooyinka badan ee Hugo Broos la qaatay ciyaartoyga sida cad uma uusan dhicin in lagu aaso xabadka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/16/georges-mandjeck-a-hugo-broos-vous-avez-rate-une-occasion-de-vous-taire/
Ter Stegen size PSG! - Maalinta #455 - VIDEO